Fihinanana “sardine” misy poizina : Olona valo namoy ny ainy -
AccueilSongandinaFihinanana “sardine” misy poizina : Olona valo namoy ny ainy
09/12/2017 admintriatra Songandina 0
Nandripak’olona indray ny fihinanana trondro misy poizina tany Antsiranana, omaly zoma. Tamin’ity indray mitoraka ity, dia irony karazany izay fantatra amin’ny anarana hoe “sardine” irony no nitera-doza. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny “Commissaire Central” any an-toerana, dia tafakatra valo ireo olona namoy ny ainy, ka ankizy ny iray tamin’izy ireo. Tsy nahazoam-baovao kosa ny isan’ireo marary mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly amin’izao fotoana izao. Araka ny voalazan’ity tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny kaomisaria ao Antsiranana ity ihany koa, dia manodidina ny sivy ambin’ny roapolo no isan’ireo narary rehefa avy nihinana io karazan-trondro nisy poizina io, ny alakamisy alina. Maty tany an-trano ny efatra tamin’izy ireo, raha toa ka tsy tana intsony ny ain’ireo efatra hafa, na dia efa nomena fitsaboana araka ny tokony ho izy aza.
Tamin’ny alalan’ny fandoavana sy ny fivalanana no nisehoan’ny tsy fahazakan’ireo olona ity hazandranomasina nisy poizina ity, ka ny fisesisesin’izany no mahatonga ny trangam-pahafatesana avy hatrany, indrindra fa ho an’ireo olona izay nipetra-drery sy niandriandry tany an-tokantranony tany. Vantany vao naheno ity tranga ity moa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny tany an-toerana , dia nidina ifotony teny amin’ireo tsena rehetra nampitandrina ireo olona tsy hanjifa io karazan-trondro, izay voalaza fa mihinana “algue” io. Efa voaporofon’ireo mpitsabo eo anivon’ny ICAM (Intoxication par la Consommation des Animaux Marins) rahateo fa ny poizina nentin’io zavatra io no nankarary sy nahafaty ireo olona ireo. “Tsy nisy tranga tahaka ity niseho ity taty Antsiranana raha tsy io omaly io, nefa dia misy mivarotra io trondro io foana eny an-tsena. Mba hisorohana ny fiverenan’ny zavatra tahaka ireny, dia nisy ny fandraisana andraikitra, ary nogiazana avokoa ireo “sardine” rehetra teny amin’ireo mpivarotra”, hoy ny nambaran’ity kaomisera ao Antsiranana ity. Nolazainy ihany koa fa hitohy anio sy rahampitso ary amin’ny fotoana mbola tokony hanaovana izany io fidinana ifotony io, ho fiarovana ny ain’ireo mponina. Tsy ao an-tampon-tanànan’Antsiranana ihany irery moa no hanaovana izany hetsika izany, fa ho jerena hatramin’ireo distrika manodidina toa an’ i Nosy Be, Ambanja, Ambilobe.
Efa niteraka resa-be ary nampiaka-peo ny mponin’Antananarivo mihitsy ny fomba ratsin’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) amin’ny famitaham-bahoaka sy fambotriana ny mponina teo aloha teo. Amin’izao fotoana izao, miverina indray izany. Nanambara mantsy ny teo ...Tohiny